Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မေလ ၂၀၁၅ ( အတာဧရာဝတီ?)	36
kai says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်တယ် သဂျီး၊ အခု မျှစ်ကြော် ထွက်တဲ့ နှစ်ဘ၀နှစ်ကန္တာ လည်း ဒီမြစ်ကိစ္စပဲ။ စိန့်လောရင့်မြစ်ကို စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ဟာ ဒေသခံ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေရဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ အမြင်ရယ်၊ ဘဘုန်းတို့ဘက်မှာ တစ်ရွာလုံးရှိနေတာရယ်ကြောင့် သူအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ လူလည်တစ်ယောက်က အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ပေးပြီးအပိုင်စီးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ တစ်ရွာလုံး ခံခဲ့ရတယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကိစ္စမှာ ဒေသခံ တွေဖြစ်တဲ့ လစ်ဘရယ်နဲ့ ကွန်ဗေးကို ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ပေးပြီး အရင်းရှင်က နေရာဝင်ယူရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လစ်နဲ့ ကွန်ဗေး ကျောချင်းကပ်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ကျန်အောင် လုပ်ရမှာလေ။ တစ်ခု သတိထားမိလား မသိဘူး။ ဒီဧရာဝတီမြစ်အကြောင်း စတင်ပြီး ဟောပြောခဲ့တဲ့စာရေးဆရာက မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ထင်တယ်။ အဲဒီ ဆရာကို တရုတ်က ဆုတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာ သတင်းတိုလေးတစ်ခုအဖြစ်ပဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သေချာကိုးကားပြီး မပြောနိုင်ဘူး။ မှားသွားရင် ကာယကံရှင်တွေကို ဆောရီးပါနော်။
kai says: မြစ်ဆုံဆည်ကန့်ကွက်ရေးကိုစပေးလိုက်တာ.. စီအိုင်အေပါ…။
နောက်ဆုံးစာရင်းချုပ်တော့… မြန်မာလူထုရှုံးတယ်..။ =
၀င့်ပြုံးမြင့် says: Thanks!
naywoon ni says: ကျွဲနှစ်​​ကောင်​ ခတ်​တဲ့ကြားက ​မြေဇာပင်​​တွေ​ပေါ့ အဲ့ဂလိုဆို ဒါမှမဟုတ်​ အင်းအားကြီး သတ္တဝါ ​တွေ စားကျက်​လု တာ ကြားထဲက ထိတ်​လန့်​​နေကြတဲ့ ယုန်​က​လေး ရှဉ့်​က​လေး​တွေ​ပေါ့ ပြည်​သူ​တွေက ။ ဆိုလိုတာက ကျ​နော်​တို့အား ကျ​နော်​တို့ အက်​​လေးနဲ့ ဘာတစ်​ခုမှမဖြစ်​နိုင်​​တော့ဘူးလား ။
kai says: လူထုအားက.. သာရမှာပေါ့..။ သန်း၅၀ကျော်တာပဲဟာ…။
အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို.. အရင်တိုက်ကြ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဒဂျီးက စီအိုင်အေ တလျှိုလားဟင်င်င် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ကျူပ်က…သူများ ဓားခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုပေးရတဲ့.. ဓလျှိုတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..။
ဟိုမှာ.. ဧရာဝတီကိုကယ်တင်ကြစာတမ်း တကမ္ဘာလုံးပို့ပေးလိုက်တဲ့.. ယူအက်စ်ကန်ပိန်းဖေါ်ဘားမား ဖောင်ဒါ.. ကိုအောင်ဒင်ကြီးတယောက်လုံး.. ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ဟာပဲ.. ဟာကို..ပဲဟာပဲကို…နော..။ http://mandalaygazette.com/54794
uncle gyi says: တနေ့ဖြစ်ရမယ့်အဖြစ်ပါ
ခင်ဇော် says: Credit to U Ravika
အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဆက်ဆံရေးကို အလေးထားသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အိန္ဒိယပြုမှုကို အများဆုံး ခံရတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို အခြေခံစဉ်းစားရပါ့မယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ ခမာ(ကမ္ဘောဒီယား)လူမျိုးတို့ဟာ ဟိန္ဒူအယူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒိယမှုအပြုခံရဆုံး ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓအယူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မွန်တို့ဟာ အများဆုံးအပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ အခြားအိန္ဒိယပြုမှုတွေ ခံကြရတဲ့ နိုင်ငံများဟာ ပျူမြို့ပြနိုင်ငံများနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရှိမြို့ပြနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအုပ်စုတွေကို ခွဲကြည့်တဲ့အခါ ပျူလူမျိုးတစ်မျိုးကပဲ ကဒမ္ဗအက္ခရာကို ယူသုံးခဲ့ပြီး အခြားလူမျိုးများအားလုံးဟာ ပလ္လဝအက္ခရာကို ယူသုံးခဲ့ရပါတယ်။ မွန်၊ ခမာ၊ ဇဝါလူမျိုးများဟာ မိမိတို့စာပေ၊ ပါဠိစာပေ၊ သက္ကတစာပေတို့ကို ပလ္လဝအက္ခရာနဲ့ပဲ မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ ပျူလူမျိုးတို့ကျတော့ သူတို့စာပေကို ကဒမ္ဗအက္ခရာနဲ့ ရေးကြပါတယ်။ ရခိုင်တို့ကျတော့ ဒေဝနာဂရီနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပလ္လဝနွှယ်တဲ့ အက္ခရာကိုကျတော့ နောက်ပိုင်းကျမှသာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ပျူစာပေမှာ သက္ကတလွှမ်းမိုးမှု အားနည်းပြီး မွန်၊ ရခိုင်၊ ခမာ၊ ဇဝါတို့မှာ သက္ကတသြဇာက ပါဠိထက် ပိုများပုံကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ပုဂံက စတင်ခဲ့ဖွယ် မရှိဘဲ သက္ကတအားသန်တဲ့ ဒေသကနေ စတင်လာမှာ ဖြစ်သလို သင်္ကြန်ပွဲဟာလည်းပဲ ဒီကနေ စတင်ခဲ့ဖွယ် ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး မွန်နဲ့ ခမာလူမျိုးတွေရဲ့ အိန္ဒိယဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များကလည်း ခ္ပွတ်စွပ်တူကြတယ်ဆိုတော့ သင်္ကြန်နဲ့သူတို့က ပိုနီးစပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အတာသင်္ကြန်ကာလမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့က ရောနှောနေကြခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သထုံ၊ လော့ဗူရီ၊ အန်ကောဝတ် စတဲ့ အရပ်တွေမှာ ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို ကြည့်တော့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ထေရဝါဒနိုင်ငံများမှာပဲ သင်္ကြန်ကာလ တူညီနေကြခြင်းမှာလည်း သတိထားဖွယ်ပါ။ မဟာယာန အားသန်လွန်းတဲ့ တိဗက်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နာမ်တို့မှာ ဒါမျိုး သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ထေရဝါဒ ထွန်းကားခဲ့ရာ သီရိလကာင်္၊ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာ ဒီဓလေ့ကို အများဆုံးတွေ့ရတော့လည်း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဟာ အများက ဝေဖန်သလို အမြင်ကျဉ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။
အလားတူကို ပြောရရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အရင်က ဟိန္ဒူတို့မှာ ဝေဒကျမ်းတွေပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပနိသျှဒ်အပါအဝင် ဘယ်ကျမ်းမှာပဲ ကြည့်ကြည့်ပါ၊ အဘိဓမ္မာသဘောတရားကို တွေ့ရတာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ သနန္တနတရားဟာ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို အများကြီး အခြေခံထားကြောင်း တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို နဝမမြောက် ဗိဿနိုးဝင်စားသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုကတည်းက ဟိန္ဒူတို့အပေါ် မြတ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရဲ့ လွှမ်းမိုးပုံကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတာသင်္ကြန်ရောက်တိုင်းမှာ ရိုးရာအမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းရသလို ဘာသာတရားအားလုံး အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုင်း အပြင်သွားစရာ ရှိလို့ ဒီစာကို ဒီမျှနဲ့ပဲ ရပ်လိုက်မယ်။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်လေး ဖြစ်ကြပါစေ။
kai says: သင်္ကြန်ကာလတွင်းမို့.. သင်္ကြန်အကြောင်းမို့.. စိမ်းထားလိုက်ပါတယ်..။
( ဒီနရာမှာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာက..ဟိန္ဒူထဲဝင်ရောတာလား.. ဟိန္ဒူဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်ရောနေတာလားကိုတော့.. မပြောလိုပါ..မပြောလိုပါ..) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: နေရူး-ဂန္ဒီအမျိုးတွေဆိုတာ… ဟိန္ဒူသာသနာ.. အင်မတန်ကို ယုံကြည်လိုက်နာသူပါ..။
မှတ်ချက်။ ။ ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်က.. ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ… လူဖြစ်ဖြစ်.. ရဟန်းဖြစ်ဖြစ်.. တရားစခန်းသွင်းတာမရှိ….ရေးချ… မရှိ..။ ထပ်ဆင့်မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ ဟိုက်ဘရစ်သာသနာကိုထောက်ပြလိုရင်းသာဖြစ်ပြီး.. ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ ယောဂ..ကသိုဏ်း.. ၀ိပဿနာ… ကျင့်စဉ်တွေအပေါ်.. ဝေဖန်ပြောလိုရင်း.. မဟုတ်..။
kai says: အခု.. မြန်မာပြည်သင်္ကြန်… တဲ့..။
ခင်ဇော် says: ကြာပါပေါ့။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဒါညိုးက ကြုံဖူးမှ သိတာကလား
ခင်ဇော် says: အဟေးဟေးးး ဟုတ်တယ်။
pooch says: သူကြီးအခု​စောနက အရမ်း​ရေစီးသန်​တဲ့ မြစ်​ကြီးတခုကို​ရောက်​ခဲ့တယ်​
နိမ့်​လိုက်​မြင့်​လိုက်​ ဖြစ်​​တော့ ဦး​နှောက်​ငြိမ်​​အောင်​ အချို​တွေစား​နေရတယ်​ မနက်​ဖြန်​ Base camp သွားပြီ
kai says: ဓါတ်ပုံလေးများတင်ပါဦးလား..
kai says: လာမည့် ၁၅ နှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ တိုးတက်မည်ဟု ကုလသမဂ္ဂပြောကြား
kai says: သောက်သုံးရေရှားပါးသောကျေးရွာများသို့ရေဖြန့်ဝေပေး
kai says: သောက်သုံးရေများ လိုက်လံဝေငှ
ဦးကျောက်ခဲ says: ရေချိုထိန်းဖို့ လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်ရပါမယ်ဆိုရင်တော့…
kai says: ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကြီးမှာ ဆည်၄၄ခုဆောက်တုံးကသာ.. ကိုရင့်လိုပညာရှင်ထွက်လာရင်.. အမေရိကန်တွေလည်း ရေမရမီးမရနဲ့… ယက်တောင်လေးခပ်နေလို့ရပြီထင်..။
Posted in: Earthquakes, News/ Current Events, Prepping. Tagged: Arkansas, disaster scenarios, Earthquake, earthquakes, Earthquakes Increasing, fault zone, Illinois, Indiana, Kentucky, major earthquake, Michael T. Snyder, Mississippi, Missouri, New Madrid, New Madrid Earthquake, new madrid fault, new madrid fault line, New Madrid fault zone, New Madrid Seismic Zone, Preparedness, Prepper, preppers, Tennessee, United States. Leaveacomment Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟဲ ဟဲ…. ဆည်ဆောက်ပြီး ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ဆိုတာ
ခင်ဇော် says: ကျောက်(စ) ပြောတာ ထောက်ခံတယ်။
kai says: မညှိပါဘူး…။ အမေရိကမှာ.. ဆည်ပေါင်း ၇သောင်းခွဲ..။
ဆက်နေ..ဆက်နေ..။ List of dams and reservoirs in the United States – Wikipedia …
kotun winlatt says: မှတ်သားစရာတွေချည်းပဲ ဖတ်ရတာတန်ဘိုးရှိပါပေ့ သို့သော် နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်တယ်ဆိုတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်တွေးစရာလေးတွေရလို့ ကျေးဇူးပါ
ဦးကျောက်ခဲ says: ဆည်ဆောက်တိုင်း မကောင်းဘူးလို့ မျက်စေ့စုံပိတ်ပြီး မငြင်းပါဘူး…
kai says: ကျုပ်လည်း.. မြစ်ဆုံဆည်လို့တိုက်ရိုက်မပြောရပါဘူး…ဦးကျောက်တုံးရယ်..။
စွမ်းအင်မရှိပဲ.. ရေချိုမလောက်ငှပဲ.. တိုင်းပြည်တခုဘယ်လိုထူထောင်ကြလည်း.. တွေးလို့မရ..။ ယူအက်စ်.. အယ်အေမှာ.. ပြီးခဲ့တဲ့.. ၁၀နှစ်လောက်ကတည်းက.. မြို့တော်က.. မြစ်တွေရေတွေမြင့်တက်လာတော့မယ်ဆိုပြီး.. မြစ်ကမ်းတွေကွန်ခရစ်ဖို့.. တံတားတွေလိုက်မြှင့်နေတာ.. မနက်ကဆိုအကုန်ပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီ..
အမ်စတာဒမ်လိုမြို့ကြီးတောင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်လယ်ဗယ်အောက်မှာ တည်နိုင်သေးတာပဲ..။ နတ်မစွမ်း လူမပေါ့..။ မဖြစ်လာသေးတွေကို.. တွေးပူနေကြတာထက်စာရင်.. ဖြစ်နေတာတွေကို.. လက်တွေ့ကျကျရှင်းစေချင်ပြီ..။
Ma Ma says: ဘာသာတရားအရမ်းကိုင်းရှိုင်းတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အသိတစ်ယောက်ပြောတာ သွားသတိရမိတယ်။
Alinn Z says: မိခင်Aရာဝဒီ
ဟီဟိ ကိုယ့်အမေကြီးကို ကိုယ်ပြန်ရောင်းစားရမှာလားဗျ
kai says: မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမား တဦးကို နိုင်ငံတကာက ထင်ရှားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆုကြီးတခုကို ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
Alinn Z says: လူသားတို့သည် ဘ၀လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ရင်းနှစ်ရာချီကာ သဘာဝတရားကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြသည်။ …တဲ့…. တင်စားချက်လေး…. က ဆက်ဆီကျတယ်… ဒါနဲ့…ပြင်ဦးမလား..
မှီသေးလား… လူငယ်တို့သည် စိတ်တွင်းပိတ်ဆို့ကာဆီးနေသမျှကို ဖွင့်၍ဖေါက်ထွက်နေကြသလားဟုပင်ထင်ရ၏။
ပလို့ ဂျိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: မှီသေးတယ်..။ ကျေးကျေး..။
Alinn Z says: ဒီတလ ထုတ်မယ့် သတင်းစာကတော့ … ရှယ် ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
အင်းလေ… ဒီလ ထုတ် သတင်းစာက… တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တယောက်လက်ထဲလည်း…အခန့်သား ရောက်ဦးမှာကိုး… ကျနော်တော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကတည်းက အခုထုတ်မယ့် သတင်းစာ ဖတ်ချင်လွန်းလို့…
kai says: ၁၉ရက် အယ်လ်အေသင်္ကြန်ကိုစောင့်လိုက်တယ်လေ..။
သဘက်ခါမနက်ဆိုထွက်ပါပြီ..။ Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.